Ahụ ike mmadụ abụrụla ihe a na-eme, ị sonyela? -Nke akụkọ-Topflor China nwere oke
Mgbatị ahụ mba aghọọla omume, ị sonyere?
Echiche:48 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-07-13 Mmalite: Saịtị
Kedu ala dị mma maka mgbatị ahụ? Nkebi ahịrịokwu a bụ nsogbu maka ndị ọkachamara mgbatị mgbatị ọkachamara. Lọ mgbatị ahụ dị iche na ebe egwuregwu ndị ọzọ. O nwere ọtụtụ ihe, yana ọrụ dị iche iche chọrọ ịhọrọ ala nwere ọrụ dị iche iche. Nweghị ike iji "mgbatị mgbatị" mee ka mkpokọta. Họrọ ala mgbatị dị iche iche dịka mpaghara dị iche iche bụkwa isi ihe ịhọrọ ụlọ mgbatị ahụ.
Ndị na-esonụ bụ ngwa nke mgbatị ahụ n'akụkụ dị iche iche nke mgbatị ahụ:
1. PVC plastic nke mgbatị ahụ
Ebe a na-eme mgbatị ahụ bụ mgbatị ahụ nwere ngwa ọrụ ikuku nwere ọgụgụ isi, gụnyere igwe eletriki eletriki maka nnukwu gyms, ụgbọ ala na-achịkwa magnetically (vetikal na kwụ), igwe elliptical, wdg. A na-atụ aro ka ịtọọ usoro egwuregwu plastik na nke a. Mpaghara.
Egwuregwu egwuregwu plastik dị nro ma nwee ezigbo mgbake ikike n'okpuru mmetụta nke ihe dị arọ, nke na-ekpebikwa nguzogide mmetụta dị egwu nke ala plastic. Nguzogide akwa nke akwa oyi akwa nwere ike iru mgbanwe 300,000, nke bụ ọtụtụ oge nguzogide akwa nke ala nkịtị ugbu a, na akwa oyi akwa na-enwe mmetụta dị egwu karịa n'okpuru mmiri nke nnyapade, na-eme ka o siere ndị egwuregwu ike ịdapụ ma daa.
2. Rubber cushions maka mgbatị ala
A na-eji ndị mmadụ akpọ ọzụzụ anaerobic dị ka ọzụzụ ike, a na-akpọkwa ụdị akụrụngwa ahụ akụrụngwa ike. A na-atụ aro ka ị dina cushions roba na mpaghara a.
Ngwurugwu na-eme ogologo ogologo nke roba na ike na-adịghị ike nke dị n'etiti ụmụ irighiri ihe na-eme ka ihe roba na-egosipụta ihe ndị nwere viscoelastic pụrụ iche, n'ihi ya, ọ na-amịpụta ujo dị mma, mkpuchi mkpuchi na ihe mkpuchi, si otú a na-eme ka nkwụsi ike nke ala ahụ dị na ya , Mbelata mkpọtụ, ịmịkọrọ mmiri na iku ume, bụ otu n'ime mmemme kachasị mma maka usoro mgbatị maka ụlọ mgbatị ebe e debere akụrụngwa dị arọ.
3. floorlọ egwuregwu ịkwanyere nke ụlọ mgbatị ahụ
Sportslọ egwuregwu PVC bụ ala egwuregwu emere maka ebe egwuregwu na-eji polyvinyl chloride ihe. E jiri ya tụnyere ala siri ike, ọ nwere nchekwa dị mma, ike ịmị amị na ike ịlaghachi azụ, na egwuregwu nke ya nwere ike ịrụ ọrụ zuru oke. Ọ na-adịgide adịgide, mara mma, ma dị n'ọtụtụ agba na ụdị. Asọmpi na egwuregwu dị ezigbo mma n'ụdị ubi a, enwere ike ichebe ndị egwuregwu nke ọma.
N'ime imewe mgbatị ahụ, enwere ọtụtụ ebe dị mma maka ịtọgbọ ala egwuregwu pvc, dị ka mpaghara ebe a na-enweghị bọọlụ, ụlọ ịgba ịnyịnya igwe kachasị mma, ime ụlọ mgbatị ahụ maka ikuku na ịgba egwu, wdg.
Udi nke mgbatị ahụ abụghị naanị ọnụ ọgụgụ nke akụrụngwa ahụike, ndị nkuzi ahụike na ụdị ahụike, kamakwa metụtara mkpokọta mgbatị ahụ, ọkachasị ala. Ahọpụtala ala n’ala n'otu ụzọ agbanyeghị ọrụ ebe ahụ n’ihi ego echekwara, ma ọ bụ iji chekwaa nsogbu, nke ga-ebute ọghọm na nsogbu na-enweghị isi. A ghaghị ịhọrọ ihe ala dị iche iche dịka mpaghara dị iche iche iji mepụta ụlọ mgbatị kachasị ọkachamara
Uru nyocha nke ịkwanyere flooring
Nha roba na akara ịbịaru ọrụ nke ebe egwuregwu dị iche iche